Khilaafkii Hargeysa oo lagu kala adkaaday iyo guddiga doorashada oo maanta la Dhaariyay +(VIDEO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Khilaafkii Hargeysa oo lagu kala adkaaday iyo guddiga doorashada oo maanta la...
Khilaafkii Hargeysa oo lagu kala adkaaday iyo guddiga doorashada oo maanta la Dhaariyay +(VIDEO)
Hargeysa (Halqaran.com) – Aadan Xaaji Cali Axmed, guddoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland ayaa maanta madaxweyne Muuse Biixi hortiisa ku dhaariyey xubnaha cusub ee Komishanka doorashooyinka ee dhawaan la dhisay, Kuwaasi oo Dood adag ay ka taagnayd Maalmihii lasoo dhaafay.
Xubnahan cusub ee komishanka doorashooyinka oo dhawaan ay ansixiyeen golaha baarlamanka Somaliland, ayaa la mariyey dhaarta Dastuuriga ah, si ay u gudo galaan gudashada shaqooyinka loo igmaday ee bulshadu ka sugayso.
Madaxweynahe Muuse Biixi Cabdi, ayaa dhaarta kaddib xubnaha komishanka cusub dardaaran adag u jeediyey, waxana uu ku adkeeyey inay dhawraan caddaaladda iyo sinnaanta, islamarkaana garsoorkooda bud-dhig uga dhigaan Kitaabka Eebbe ee ay ku dhaarteen maanta.
Xisbiyadda UCID iyo Waddani ayaa horay uga soo horjeestay Meelmarinta Xubnahan, Taasi oo keentay in Hargeysa lagu xidho Masuuliyiin ka tirsan Xisbiga Wadani.
Arrintan ayaa hada u muuqata mid lagu kala Adkaadya oo Xukuumaddu Somaliland ay guul ka gaaray.
guddiga doorashooyinka oo la dhaariyay
Khilaafkii Hargeysa oo lagu kala adkaaday